Linggba ịnyịnya ígwè ọ na-eme ka ụmụ ehi gị buru ibu? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Gba ígwè ehi - ekwe omume ngwọta
Gba ígwè ehi - ekwe omume ngwọta
Linggba ịnyịnya ígwè ọ na-eme ka ụmụ ehi gị buru ibu?
Azịza ya bụ: are gaghị azụliteibuapata ma ọ bụụkwụnaanị siteịgba ígwè. Bụ onye na-eme mmega ahụeme ka gịakwara na-eguzogide ike ọgwụgwụ, mana na-enweghị ịgbakwunye nnukwu ibu. Mgbeịgba ígwè na-emeọ bụghịiruuka ma obu mepee ohuruụmụ ehimọzụlụ; yana-emetinye ike na ụlọ ya nnukwu ntachi obi.Ọgọst 26 2020
Kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com. Abia n’ihe umu ehi, otutu ndi mmadu g’eduba gi ikwenye na igha abu nwa ehi ma obu gh ibu nwa ehi.
Enwere m ike ịgwa gị na nke ahụ bụ eziokwu. Jenetik na-arụ oke ọrụ na njedebe nke ụmụ ehi gị, mana enwere ihe ị nwere ike ime iji gbanwee nke ahụ ma mee ka ọnọdụ gị ka mma. Abụ m Jeff Caveliere, enweghị mgbagha, mana enwebeghị m mgbagwoju anya na Jeff Calfaliere.
Ihe nkea mere m - mgbali m mepụtara ụmụ ehi ka mma - kpaliri m ịchọta ụzọ ndị ọzọ m ga-esi mee nke a. Aga m agwa gị na mgbe gị na ndị ọkachamara na-eme egwuregwu na-arụ ọrụ, enwere otu ihe ị ga-ahụ maka mgbatị ha: enweghị ọtụtụ ọrụ nwa ehi na ya. Nke ahụ bụ n'ihi na ihe kachasị mkpa nke ọrụ ahụ n'onwe ha, egwuregwu ahụ n'onwe ha - ndị ọgba ọsọ, ndị na-agba ọsọ, ndị egwuregwu bọọlụ bụ ndị ga-aga n'ọtụtụ ụzọ - na-enwekarị ọfụma nwa ehi n'ihi na ha nwere otu ihe anyị na-eme anaghị eme ka ọ dị elu, esemokwu ukwu mkpi.
Kedu ihe m na-ekwu? Ọ bụ mgbe ị na - eme ka esemokwu dị elu n’otu nkwekọrịta na obere oge. Obere oge. Nke ahụ bụ isi, isi ihe na-ewu nnukwu ụmụ ehi n'ihi na ọ bụ otu a ka ha si anabata ya nke ọma.
Nke a bụ otu ị si mepụta nnukwu ibu. Ya mere, nke a bụ ohere iji gosi gị otu esi eme nke a n'ụlọ na enweghị ngwaọrụ. Will ga - edo onwe gị dịka m nọ ebe a, n’elu akwa ma ọ bụ n’elu ala, ụkwụ etinyere n’okpuru oche dịka m na - egosi gị, ma ọ bụ n’okpuru otu arịa, oche ndina, ihe ọ bụla ị na - eme bụ ịkwanye onwe gị ala.
Are ga-achọpụta na nkwonkwo ụkwụ gị gbagọrọ agbagọ, ka ụkwụ gị gbagọrọ agbagọ, ụmụ ehi gị na-ekwukwa ka ị nọrọ n'ọnọdụ a. Ugbu a, a na-emepụta esemokwu ebe a, mana nke ahụ abụghị ihe anyị na-achọ. Ihe anyị ga - eme bụ inye mkpirisi ngwa ngwa - mkpachapụ anya - nke a na - ebufe - n’ime obere oge.
Mgbe ahụ ị ga-eche ya. Ọ bụrụ na anyị dị otu a, anyị na-ebido onwe anyị. Naanị ihe na - egbochi m ịda n'ala ihu m n'oge a bụ mgbagha siri ike nke ụmụ ehi.
bụ maple sirop dị mma maka gị
Ike siri ike. Ọ bụrụ na ịmee, a na m ekwe gị nkwa na ị ga-enwe mgbakasị ahụ ike karịa mmega ahụ ọ bụla ị mere. Achọghị m ịma ma ọ bụrụ na ị na-eme nke a na-eguzo nwa ehi guzo ọtọ na 300 pound.
Maa amụma? Oge ị na-ebu kilogram iri na ise, ọ ga-abụrịrị ahụ gị. Oge ọ bụla ị na-eme ihe, ahụ gị na-enwe obi ụtọ na kilogram 150. Yabụ ọ bụrụ na ị gbakwunye, ọ nwere ike ijikwa 300 pound.
Enweghị nfefe. Ya mere, laghachi na-eme. Ighasị ebe a ga - ehulata ikpere gị ka i wee nwee ike ilekwasị anya na sọọs gị karịa afọ gị.
Ugbu a, ihe bụ akụkụ dị mkpa nke ụmụ ehi gị. Ọ bụ akwara dị n'okpuru afọ a na-ahụ anya. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịzụlite nke a, ị nwere ike ịmalite iwu ya na.
Ppupu gastroc na-enye ụmụ gị oke nha na nkọwapụta ya abụghị ileghara akwara a anya. Ihe dị mma banyere njem a bụ na m na-esi n'otu ọnọdụ ikpere ụkwụ gbagoo n'ọnọdụ ikpere agbatị. N'ihi ya, m na-emekwu afọ, ọ bụrụ na m na-apụtawanye ike na mmega ahụ, enwere m ike ịbawanye ụfụ afọ n'ihi na enwere m ike ịgbasa.
N'ezie, ọ bụrụ na m chọrọ, enwere m ike ịmalite ozugbo site na ịtọgbọ Physioball n'ihu m na ịmalite ịmalite ọrụ n'ihi na enwere m ike ịdabere na ya iji nweta m ebe ahụ. Echiche bụ ụmụ okorobịa a, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite iwu nnukwu ụmụ ehi, ọ bụghị maka ole mmega ahụ ma ọ bụ ole ị na-eme. Ọ bụ maka ịme nnukwu reps na ime ka ụmụ ehi gị kacha mma.
Nke ahụ na-adị n’onwe m na-ebubiga ọkụ ókè. Nke a ga - eme ka ụmụ ehi buru ibu ma ọ bụ ya mere ị ga - eji hụ ya nke ọma na ndị egwuregwu n'ihi na ha na - eme ya oge ọ bụla ị batara n’ọhịa. Nwere ike ime ya ugbu a, ma ugbu a, ị nwere ngwa agha na ngwa agha gị iji nyere gị aka pụta.
aha igwe kwụ otu ebe
Ọ bụrụ n’ịchọtara ụmụ nwoke akụkọ a na - enye aka, biko hapụ azịza na isi aka gị n’okpuru. O doro anya na m agụla ihe ị na-ekwu. 'Ve na-arịọ maka nwa ehi a nwa oge ugbu a, m na-enye gị ya.
Achọrọ m ka ị na-ahapụ ịhapụ ihe ị na-ekwu n'ihi na ọwa a gbasara gị ma achọrọ m inye gị ihe ị hụrụ chọrọ. Umu nwoke oma. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ị na-achọ mmemme zuru oke iji rụọ ọrụ na-enweghị ngwa ọ bụla, anyị nwere mmemme ATHLEAN-0 na ATHLEANX.com.
Chọghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ibu ahụ gị, dị ka mmega ahụ a, ị nwere ike ime nnukwu mgbanwe naanị izu isii. Umu nwoke oma. Nke ahụ agwụla na ATHLEANX.com.
Anyị ga-ahụ gị ọzọ na ụbọchị ole na ole.
Ndi ịgba ígwè na-aru oru umu ehi gi?
Ọ na-emegide ya, mana o doro anya na ọ bụ eziokwu. Ihe ọmụmụ ndị a na-egosi na ọ bụ ezieihequads na glutes na-arụsi ọrụ ike n'ogeihepedal stroke (dịka ị ga-atụ anya ya),nwa ehinwere ihu ọmaiheụkwụ kwụsie ike naihepedal.Nwa ehirụọ ọrụ dị ka njikọ dị n'etitiiheụkwụ naihemmepụta ikike nke quads / glutes.
Ndi ịnyịnya ma ọ bụ ịgba ọsọ ka mma maka ụmụ ehi?
Nana-agba ọsọ, akwara ndị bụ isi e ji mee ihe bụ hamstrings, quadriceps, glutes, iliopsoas naụmụ ehi. Mana-agba ọsọma ọ bụịgba ígwèna-achọ iwulite akwara akwara; n'eziokwu, egwuregwu ndị a nwere ike ime ka eriri anụ ahụ belata n'ihi na ahụ chọrọ iji eriri akwara rụọ ọrụ nke ọma.15 jan. Dec 2019
Cycgba ígwè ọ na-ewute ụmụ ehi gị?
Mmerụ ahụiheobere akụkụ, jikọtara yaịgba ígwè, bụ nsogbu nkeihequadriceps, hamstring, nanwa ehimọzụlụ, yana ngafe (tendinitis) nkeiheAchilles na patella aka.
Cycgba ígwè ọ dị mma maka ụmụ ehi siri ike?
Ndị na-amalite mmemme mmemme enyemaka onwe onye nwere ike irite uru ozugbo, na-enwe mmụba ozugbonwa ehinkwonkwo akwara. Mezue mmega ahụ a kapịrị ọnụ, ịga n'ihu / post na 24 awa mgbe ị gachara. Dị kandị na-agba ígwè, anyị niile enweelaakpịrị,ukona / ma ọ bụ dị nronwa ehimọzụlụ.Sep 11 2014
lentil pasta oriri na-edozi
Cycgba ígwè ọ na-enye gị ụkwụ taa?
Ha abụọịgba ígwèna igba oso nwere ike inyere akagịụda naebughibualaụkwụ gị. Ka eweretẹchaa ụkwụ gị,gịga belatanke gin'ozuzu abụba ahụ. Ha na agba oso maịgba ígwèdị irè maka kadio na abụba na-ere ọkụ. Mgbe ejikọtara ya na iri nri dị mma,ụkwụ gịgaebughibugbadata ma nweta nkọwapụta akwara.Eprel 6 2018
Gịnị mere ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji enwe ụkwụ buru ibu?
“Ọkachamarandị ịnyịnya ígwè nwerea ibuapataakwara akuku akuko karia ndi na-ndị na-agba ígwè, ”Ka Gottschall na-ekwu. Karịsịa akpọpụta bụ akwara quadriceps nke na-akụda pedal ala, yanaburu ibuakwara hamstring nke na-enyere aka ikpochapu ụkwụ.Jenụwarị 25. 2021
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè nwere ụkwụ ukwu?
Cycgba ịnyịnya ígwè ọ na-ebelata mọzụlụ nwa ehi?
Na-agbanwe agbanweAkwaraMgbu naCygba ígwè
Cygba ígwèbụ otu n’ime ọrụ ole na ole n’ime yamọzụlụnkwekọrịta nkwekọrịta (mgbe ọ na-adị mkpụmkpụ), kama ịbụ nke eccentrically (mgbe ọ na-agbatị). Ugboro ugboro imegharịakwaraemep uta erimee mkpụmkpụọ buru na emeghi ihe.Eprel 23 2018
Ebee ka ụmụ ehi gị na-aga mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè?
Dabere na mpaghara azụ azụ nke ụkwụ gị, ụmụ ehi dị mkpa maka mgbatị ụkwụ ụkwụ n'oge ọ bụla ị na-aga ụkwụ. Omume ịgba ịnyịnya ígwè na-adị mgbe niile, ma ọ bụ n'okporo ụzọ, n'okporo ụzọ ugwu ma ọ bụ n'ime mgbatị ahụ nke mpaghara gị, nwere ike inyere gị aka ime ka akwara nwa ehi gị dị ike.
Kedu ka esi gwọọ nwa ehi mmerụ site na ịgba ịnyịnya ígwè?
Ikiri ụkwụ n'ikiri ụkwụ abụọ nwere ike inyere gị aka izu ole na ole ka ha na-ebelata ibu na akwara nwa ehi ka ị na-aga ije. Igwu mmiri ma ọ bụ ịgba ịnyịnya nwayọọ bụ ụzọ dị mma iji mee ka ọbara na-asọba na akwara iji kwalite ọgwụgwọ. Ọ ga - abụ ihe agbamume nye obi ike gị ịlaghachi na igwe kwụ otu ebe mgbe akwara gị na - agwọ ma kpachara anya ka ị ghara imebiga ya ókè.
Ebee ka umu ehi di n'ime aru?
Dabere na mpaghara azụ azụ nke ụkwụ gị, ụmụ ehi dị mkpa maka mgbatị ụkwụ ụkwụ n'oge ọ bụla ị na-aga ụkwụ. Mgbu akwara na nkwonkwo nke ụmụ ehi na-arụkọ ọrụ na mkpịsị ụkwụ na quadriceps na ụkwụ elu iji mee ka ụkwụ gị na-agagharị.